Labo othanda ukudweba isikhathi esiningi futhi mikhulu imidwebo, ngokuvamile olukhethiwe ubunjalo upende ngendwangu noma iphepha. Ngokungangabazeki, umculi, ngisho saqala, udinga ukuba ne-Iyizeli. Le divayisi esivumelana kakhulu ukupenda umsebenzi omuhle futhi ubeke izinto ngononina. Iyizeli kumane esisemqoka umculi, kodwa workshop ezikhethekile le nto kubiza ngokungenangqondo ezibizayo. Ngoba nje umklamo walo ulula, kulula ukwenza Iyizeli ngezandla zakhe. Lokhu akudingeki ukuba umbazi onguchwepheshe kakhulu, badinga kuphela ukuba babe khona amathuluzi adingekayo kanye izinto, futhi yilezi:
- plywood ishidi 100h60sm ukujiya 3-4mm;
- imishayo ezine lokhuni 6h2sm uqweqwe 2 m ubude;
- ezimbalwa ngezikulufo, izinzipho, izihibe ezimbili;
- Jigsaw zibe yizinkuni;
- lokukhuhla futhi ifayela;
Futhi manje sihlole kabanzi indlela yokwenza i Iyizeli ngezandla zakhe. Ngakho, ukulungiselela amabhodi ipulangwe. Khumbula ukuthi wenza kakhulu lokhu design bona, ngakho-ke wazama ukuzenza olinganise ukuze uzizwa ukhululekile. Iyizeli Standard livame ukuphakama ngaphakathi 150-170sm, kungcono ngokwanele ukuze bakwazi ukujabulela umkhiqizo omdala, ngempela umuntu omude. Futhi, unqume ukuthi uya ukupenda - emi noma ukuhlala, njengoba Ubukhulu ngenhla zidizayinelwe "sedentary" Iyizeli.
Manje, ukwenza Iyizeli ngezandla zakhe, udinga ukwenza izakhi eyinhloko umklamo wesikhathi esizayo, futhi into yokuqala udinga ukwenza - kungcono imilenze. Njengoba yenziwe ngu Amabha umphetho iqonde, zilingana, izingcezu ezine. Ngendlela efanayo abasenzele nokubopha imilenze. Kungcono kancane isikhathi eside kunaleso ububanzi ishidi plywood. Okungenalutho kudingeka lokukhuhla pre-sanded. Akubalulekile ukuchaza ukuthi uma ungangiboni, amathuba ukushayela ngokwako izwibela. Noma yimuphi ukucutshungulwa izingxenye okudingeka uyenze ngaphambi uqala ukuhlangana isakhiwo, ngaphandle kwalokho inqubo ukugaya kuzokuhlupha kakhulu, isikhathi eside futhi kakhulu amandla esiningi.
Ukuqhubeka ukwenza Iyizeli ngezandla zakhe, izinyawo badinga uphawu ezinhle. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa Chopyk. Zenziwa kusukela izinkuni ezomile futhi ube 2-2,2sm ubukhulu. Amabili Chop kufanele kube kancane isikhathi eside kunaleso ububanzi ishidi yokwakha yaseGrisi (bayobizwa kuvikelwe ezansi imilenze), uphinde ulungise ezimbili "by iso", ukulinganisa ibanga oyifunayo phakathi kwemilenze phezulu. Ukubeka ezindaweni ezimbili ukwenza idizayini eziqine kakhudlwana. Ukukhiqiza i Iyizeli ngezandla zakhe, thatha ekuqhubekeni kwebhizinisi wenze sokuprakthiza ezimbili ezincane, mayelana 2 cm ububanzi, emigodini imilenze lezo zindawo lapho ukufakwa sihlelelwe ukukhweza. Kungakuhle Chopyk kufanele ukushayela emgodini nesicelo webutho. Ngakho ukuthi umklamo kwaba aqinile, ungakwazi gcoba kokungathembeki glue.
Uma wenza i-Iyizeli ngezandla zakhe, zibuthene hhayi umklamo ukusonga, yonke imininingwane anganqanda izinzipho abavamile, kodwa kungcono ukuthi umkhiqizo kwazivelela, ngakho-ke kuthatha indawo encane lapho agcinwe. Manje, lapho amabhangqa amabili imilenze zilungele, badinga ukuba babe nobuhlobo obuseduze nomunye. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa amaluphu. Ayakhululwa ukuba 5 amayintshi ukusuka emaphethelweni komzila. Locked iluphu kuya wesitimela engu- nge ngezikulufo. imilenze emibili phambi udinga ukufaka engu- komzila, okuyinto wabethelwa ishidi ipulangwe. Ingase futhi ukubophela nge ngezikulufo. Ukuze ukwakha ukumelana kahle umonakalo mechanical, izinga lokushisa futhi wakhuthazelela ngifike umswakama, kufanele aphathwe ngopende noma ukuvenisha. Luphinde ukunikeza umkhiqizo ukubukeka yobuhle ngaphezulu.
Lokho konke kusele kuze Iyizeli ukuze ome kahle, futhi ungakwazi ngokuphepha uqhubekele yokuzilibazisa. Ngemva umdwebo zibelula ngabo kunokuba etafuleni kanye, ungahlala nje futhi sibheke umsebenzi wakhe kude. Lokhu kukuvumela ukuba ubone ezinye ukungafani figure, okuyinto akasoze ayenza, ngokudweba etafuleni.
Indlela ukufaka umshayeli kwiphrinta: amathiphu namasu
Amathimba e-Olimpiki aseRussia - abadlali bezemidlalo abakhulu kunazo zonke ezweni
Kuyini Lynch syndrome? Lynch syndrome: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, zokuvimbela